Gonadotropin for Inaliti (GnRH) - China Ningbo Second hormone
Shuniu GnRH (afanelekileyo iinkomo zobisi) Gonaderelin ukuba isitofu Iklasi wesine kazwelonke ichiza elitsha lwezilwanyana [Inkcazelo] Lo imveliso umhlophe okanye off-ezimhlophe ngumkhenkce-wokwaphusa esisixa okanye powder. [Umsebenzi kunye Sebenzisa] Le mveliso ingazisa nobubovu prepituitary isilwanyana ukukhulula hormone follicle-ushukumisa (FSH) kunye hormone luteotropin (LH). Kuye nefuthe kuliyeza kuzo zonke iintlobo zezifo maqanda, ingakumbi ngenxa cysts follicular. Kwakhona unalo nefuthe amatyala ukuba omzimba ukuba ...
Shuniu GnRH (afanelekileyo iinkomo zobisi)
Gonaderelin ukuba isitofu
T yena national fourth class of new veterinary drug
Le mveliso umhlophe okanye off-ezimhlophe ngumkhenkce-wokwaphusa esisixa okanye powder.
[Umsebenzi and Sebenzisa]
Le imveliso ingazisa nobubovu prepituitary isilwanyana ukukhulula hormone follicle-ushukumisa (FSH) kunye hormone luteotropin (LH). Kuye nefuthe kuliyeza kuzo zonke iintlobo zezifo maqanda, ingakumbi ngenxa cysts follicular. Kwakhona unalo nefuthe amatyala ukuba omzimba ukuba chorionic gonadotrophin (HCG) okanye LH. Kunokuba ukumphilisa ukusilela ovulation of follicle (ovulation kulibaziseke); kokuba co-ezakusetyenziswa kwezichumiso ngumntu, kwaye ngonyuka ukunyusa izinga akhawulwe estrous bemfuyo. Ukongeza, loo nto idla isetyenziselwa ekubuyiselweni ekuqaleni zokusebenza maqanda emva kokunikezelwa ngokwezonyango (kwisithuba seentsuku ezingama-40 emva kokubeleka); ngayo kwakhona isetyenziselwa estrus ixesha, iphelelwe amadlozi ngesirinji ukunqumlela lokuphumla unikezelo ukwenzela ukuphucula ngokupheleleyo ukuchuma lenkomo.
1.Curing cysts follicular: kucetyiswa ukuba bafake intramuscularly Shuniu GnRH 200 mcg ngenxa ephilisa cysts ezibalulekileyo follicular; kucetyiswa ukuba bafake intramuscularly Shuniu GnRH 100 mcg ngenxa ephilisa cysts abanomoya follicular.
2.It Kucetyiswa ukuba bafake intramuscularly Shuniu GnRH 100 mcg ngenxa Wayephilisa kusilela ovulation.
3.It Kucetyiswa ukuba bafake intramuscularly Shuniu GnRH 100 mcg ngenxa yaphila loo quiescence ovarian.
4. Kucetyiswa ukuba bafake intramuscularly Shuniu GnRH 100 mcg nangokukhuthaza ovulation.
5. ilungiselelwe-isetyenziswe kunye inaliti Cloprostenol Sodium (PG) ukuba amadlozi ngesirinji lokuchwetheza iinkomo zobisi (kuba ukusetyenziswa elicaziweyo umthamo, nceda ubone 19 th iphepha le ncwadi, Shuniu GnRH (afanelekileyo iinkomo zobisi) )
Akuvunyelwe ukuba isetyenziselwe ukukhuthaza ukukhula.
100mcg × iibhotile 10
Lugcinwe imeko moya emthunzini (ngezantsi 20 ℃).
Inyama iintsuku ezisi-7, ubisi iiyure ezili-12.
Previous: Estradiol benzoate Inaliti (estrogen)
Okulandelayo: LHRH-A2 for Inaliti Bovines & Swine
Gonadotropin Kuba Inaliti (Gnrh)
Pregnant Mare serum Gonadotropin for Inaliti ...
Dexamethasone phosphate Inaliti